मापसे गरेका प्रधानध्यापक नै विद्यालय भेटिएपछि....! - Hamrokhotang
Home » News » Serofero » मापसे गरेका प्रधानध्यापक नै विद्यालय भेटिएपछि....!
मापसे गरेका प्रधानध्यापक नै विद्यालय भेटिएपछि....!
By: HamroKhotang.com on Thursday, November 24, 2016 /
खोटाङ, ९ मंसिर । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङले मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालय आएका सरस्वती माबि अर्खौलेका प्रधानाध्यपक डिकबीर राईलाई राजीनामा गराएको छ । बिहिबार गरिएको छड्ने अनुगमनकाक्रममा प्रअ राई मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको पाइएपछि तत्काल राजीनामा मागिएको हो ।
विद्यार्थी संगठनका प्रमुख एकं प्रतिनिधि तथा पत्रकारको टोली लिएर छड्के अनुगमनमा निस्किएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले मादक पदार्थ सेवन गरेर बिद्यालय आएको फेला परेपछि प्रअलाई कडा शैलीमा राजीनामा मागेका थिए । मादक पदार्थ सेवन गरेर बिद्यालयमा आएको अवस्थामा फेला परेका प्रअ राईले आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउने शर्तमा जिशिअ समक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
शर्त विपरित आगामी दिनमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर बिद्यालयमा आएको पाइएमा राजीनामा स्वीकृत गर्नेगरी राजीनामा मागिएको जिशिअ नेपालले बताए । ‘छड्के जाँचमा पुग्दा प्रअले नै मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालयमा आएको पाइयो,’ जिशिअ नेपालले भने, ‘प्रअले नै मापसे गरेर आएपछि विद्यालयको अनुशासनको हालत कस्तो होला, त्यही भएर राजीनामा मागिएको हो, पुःन गल्ती दोहोरियो भयो भने राजीनामा स्वीकृत हुन्छ ।’
छड्ने अगुमन गर्दै अनियमितता गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अभियान थालेको जिशिअ नेपालले गत मंसिर ६ गते आईतबार मापसे गरेर बिद्यालय आएको अवस्थामा फेला परेका नेर्पा–८ रामपुरस्थित जनता निमाबिका शिक्षक लक्ष्मीप्रसाद राई र कार्तिक ३० गते सरस्वती आधारभूत प्राबि पोखरीका शिक्षक मिनबहादुर खत्रीलाई पनि राजीनामा गराएका छन् । गल्ती दोहो¥याए दुबै शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने जिशिअ नेपालले बताए । शिक्षक लक्ष्मीप्रसाद छड्के अनुगमनकाक्रममा मापसे गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए भने मिनबहादुर अभिभाबकले दिएको सुचनाका आधारमा पक्राउ परेका थिए । जिशिअ नेपालले बिहिकार हलेसी, दुर्छिम, अर्खौले, च्यास्मीटार लगायतका क्षेत्रका बिद्यालयमा छड्ने अनुगमन गरेका छन् ।
जिशिअ नेपालले बिद्यार्थी नेता तथा पत्रकारलाई समेत अनुगमन गर्ने बिद्यालयको बिषयमा जानकारी नदिइ बिभिन्न बिद्यालयमा पु¥याएका छन् ।